सरकारले असोज मसान्तभित्र थप एक करोड पाँच लाख खोप ल्याउने
काठमाडाैं–सरकारले आउँदो असोज मसान्तभित्र थप एक करोड पाँच लाख खोप ल्याउने भएको छ ।
उहाँका अनुसार सरकारले आफैं खरिद गरी ल्याउने प्रक्रियामा रहेकोे, विभिन्न मुलुकहरुले अनुदानमा दिएको र कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत उक्त परिमाणको खोप ल्याउन लागिएको हो । सरकारले चीनसँग खरिद गरेर ६० लाख भेरोसेल खोप आउँदो भदौ मसान्तसम्म र भारतबाट खरिद गरिएको कोभिशिल्ड खोपको १० लाख मात्रा भदौको पहिलो साता नेपाल आइपुग्ने तालिका छ ।
सरकारले कूल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत अर्थात पहिलो प्राथमिकतामा रहेका दुई करोड १५ लाख र पछिल्लो समय १२ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका ४९ लाख गरी दुई करोड ६५ लाखमा खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको मृत्यु दर १.३ प्रतिशत र निको हुने दर ९४.५ प्रतिशत छ । नेपालमा अहिले सङ्क्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । २०७७ चैतको पहिलो सातादेखि २०७८ वैशाखको अन्तिम सातासम्म दोस्रो लहर उच्च विन्दुमा रहेको थियो ।
गत वैशाख २७ गते सङ्क्रमण दर सबैभन्दा बढी ५१.८ प्रतिशत रहेको थियो । जेठ ६ गते सबैभन्दा बढी एक हजार ७४८ जना आइसियुमा र जेठ ८ गतेसबैभन्दा बढी ५२३ जना सङ्क्रमित भेन्टिलेटरमा रहेका थिए । यसैगरी सङ्क्रमणको पहिलो लहर २०७६ माघ ९ गतेदेखि २०७७ साउन ३ गतेसम्म चलेको थियो ।
उक्त अवधिमा सङ्क्रमण दर ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । पहिलो लहरमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित असार १९ गते देखिएकोमा सङ्क्रमण ओरोलो लाग्दै गत साउन ३ गते ५२ जना पुगेका थिए ।
प्रकाशित: Monday, July 26, 2021 | 18:39:00 सोमबार, ११ श्रावण, २०७८
न्यायिक निकाय चुनावमा केन्द्रित हुँदा हिंसा पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित !
समाजमा घट्ने विभिन्न किसिमका विवाद, हिंसा, दुव्र्यवहार, विभेदको विरुद्धमा उजुरी दिने निकाय हो न्यायिक समिति । यो समिति हरेक पालिकामा उपमेयर/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको हुन्छ ।...
यतिखेर स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मौन अवधि छ । देश–विदेशमा रहेकाहरू भोट खसाल्नका लागि गाउँ फर्किएका छन् । आफ्नो वडा, पालिकाका प्रतिनिधि चुन्न नागरिक आ–आफ्नो...
के समाजसेवा गर्ने बाटो राजनीति मात्र हो ?
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५३ पालिकाबाट १ लाख ४० हजार ८ सय ५९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये ८९ हजार २ सय ३७...
नेपालका राजनीतिक दल एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत किन राख्दैनन् ?
यतिखेर देश चुनावमय छ । दलका नेता–कार्यकर्तालाई घरदैलो गर्दैमा भ्याइनभ्याइ छ । सत्तामा रहेका दलहरू तालमेल गरेर अघि बढिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा...
घरका महत्त्वपूर्ण काममध्ये हामीले देख्दै, गर्दै र भोग्दै आएको एउटा काम हो– भान्छा । र, यो भान्छाको कामलाई समाजले परापूर्वकालदेखि महिलाको काँधमा सुम्पिदिएको छ ।...